Mitsabo ny faritra nokaikerin’ny moka
Raha nokaikerin’ny moka dia ahosotra eo amin’ilay faritra voa ny « déodorant » miendrika « roll-on ». Hitony haingana ny mangidihidy sy mivoara-mena. Manamaina ny mony koa ny « déodorant » ary mampitony ny mivoara-mena rehefa avy niaratra amin’ny tongotra ohatra.
Misoroka ny hatsembohana amin’ny tati-nono
Mba tsy ho tsapa loatra ny hatsembohana eo amin’ny faritry ny tatinono mipetaka mivantana amin’ny vatana dia asiana “deodorant” kely ireo faritra ireo. Mety foana na ilay karazany ahosotra na ilay atsifitra.
Manala « vernis »
Raha tsy manana « dissolvant » intsony kanefa efa miepaka ny vernis dia izao atao : alona rano mamay aloha ny hohon-tanana dia asiana « déodorant » mitsifitra kely ny vovo. Io no hikosehina sy hanadiovana azy.
Rehefa anaovana elaela ny solomaso dia mety hikorisa fotsiny manaraka ny orona, noho ny hatsembohana. Voatery akarina foana ilay solomaso. Mba hisorohana izany dia asiana “déodorant » kely eo amin’ny faritra mifanandrify ny orona, amin’ilay solomaso. Hitazona azy ho maina ela kokoa izany.
Misoroka ny tanana tsembo-dava
Misy karazan’olona mora tsembo-tanana. Mahamenatra ery ny miarahaba olona amin’ny tanana mandomando tahaka izany. Tsy hanana izay olana izay intsony ianao raha toa ka manosotra “deodorant” kely amin’ny fela-tanana. Amainina tsara kosa ilay izy vantany vao voahosotra na voatsifitra.